बिश्व चर्चित फुटबलर नेइमारमाथि यौन हिंसाको उजुरी – www.agnijwala.com
बिश्व चर्चित फुटबलर नेइमारमाथि यौन हिंसाको उजुरी
बिश्व चर्चित फुटबलर नेइमारमाथि यौन हिंसाको आरोप लागेको छ । ब्राजिलका फुटबल स्टार नेइमारविरुद्ध ब्राजिलको साओ पाओलोमा एक महिलाले आफूमाथि यौन हिंसा गरेको आरोप दर्ता गरेकी हुन् । ती महिलाले पेरिसको एक होटलमा आफूमाथि नेइमारले यौन हिंसा गरेको आरोप लगाएकी छन् ।
ती महिलाले प्रहरीमा दिएका उजुरीका आधारमा आफूले नेइमारलाई इन्स्टाग्राम मार्फत चिनेको उल्लेख गरिएको छ ।
नेइमारकै आग्रहमा पेरिसमा आफूहरुको भेट भएको ती महिलाले उल्लेख गरेकी छन् । महिलाको नाम खुलाइएको छैन । ब्राजिलकी ती महिलालाई नेइमारले नै फ्रान्सका लागि विमान टिकटको व्यवस्था गरेका थिए र उनका लागि होटल साफिटेल पेरिसमा कोठा बुक गरिदिएको थिए ।
घटना गएको यहि मे १५ को रहेको उल्लेख गरिएको छ । नेइमार होटल आइपुग्दा रक्सीले मातेको अवस्था रहेको ती महिलाले आरोप लगाएकी छन् । केही गफगाफ र असहज वातावरणपछि नेइमार आक्रोशित बनेको र आफ्नो इच्छा विपरित यौन सम्बन्ध कायम गरेको ती महिलाले आरोप लगाएकी छन् । ती महिला दुई दिनपछि ब्राजिल फर्किएकी थिइन् ।
उता नेइमारका पिता नेइमार डोस सान्तोसले भने सम्पूर्ण घटना आफ्नो पुत्रलाई ‘ट्रयाप’ मा पर्नेका लागि रचिएको स्पष्ट रहेको उल्लेख गरेका छन् । ती युवतीसँग नेइमारको ह्वाट्सएपमा भएको कुराकानी सार्वजनिक गर्न पर्ने भए पनि आफूहरु तयार रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
देशैभर डुब्यो धान
बैंकहरुले ब्याजदर बढाए कुनमा कति ब्याजदर ?
दसैंमा सात करोडको खसीबोकाको कारोबार
असन्तुष्टलाई फकाउँदै यादव
आज यी स्थानमा भारी वर्षा हुने ? पहाडी भेगमा हिमपातको सम्भावना
कैलालीमा बाढी र पहिरो : तटीय क्षेत्रका बस्ती जोखिममा
अमेरिका: कोलिन पावेल, पहिलो कालो विदेश मन्त्री कोविडको कारण मृत्यु
आज तपाईंको दिन यसरी बित्दैछ हेर्नुस् राशिफल
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड ASIA’S BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2021 बाट सम्मानित